भारत र अस्ट्रेलियाबीच तीन म्याचको एकदिवसीय शृंखला शनिबारदेखि, कसको छ पल्ला भारी ? – Everest Dainik
भारत र अस्ट्रेलियाबीच तीन म्याचको एकदिवसीय शृंखला शनिबारदेखि, कसको छ पल्ला भारी ?
काठमाडौं, पुष २७ । अस्ट्रेलिया र भारतबीच तीन वानडे म्याचहरूको शृंखलाको पहिलो खेल शनिवार सिड्नीमा खेलिँदैछ । दुवै टोलीहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो प्रतिस्पर्धा निक रोचक हुने देखिन्छ । भारतले ११ वर्षयता अस्ट्रेलियाको घरेलुमैदान्मा कुनै पनि शृंखला जितेको छैन भने उता अस्ट्रेलियाले पनि टेस्ट शृंखलामा हारको बदला लिने पुरापुर मौका यस शृंखलामा खोज्ने बताइन्छ ।
भारतले यसअघि २००८ मा महेन्द्रसिंह धोनीको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियामा सिरिज हात पारेको थियो । त्यस उता उसलाई सधैं हारको मात्रै सामना गर्नु परिराखेको छ । अस्ट्रेलियाका निम्ति भने यसपाली साढेसाती नै लागेको छ ।
बल टेम्परिङको आरोपमा पूर्व कप्तान डेभिड स्मिथ र डेभिड वार्नर एक वर्षका लागि प्रतिबन्धित रहेका छन् भने यस अघि उसले इङ्ल्याण्डविरुद्ध पाँच र दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध तीन खेलका शृंखलाहरू हारिसकेको छ । त्यति मात्र होइन पछिल्ला दुवै शृंखलाका आठ म्याचहरूमध्ये उसले एउटामा मात्र सान्त्वना जीत हात परेको ताजा तथ्यांक रहेको छ ।
के भन्छ तथ्यांकले ?
आइसीसीको ओडीआई ऱ्याङ्किङ्मा अहिले १२६ अङ्कका साथ इङ्ल्याण्ड शीर्षमा रहेकोछ भने १२१ अङ्कका आठ भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । अस्ट्रेलिया १०० अङ्कका साथ तालिकाको छैठौं स्थानमा रहेको छ । यस वरियातालाई हेर्ने हो भने पलडा भारतको भारी देखिन्छ ।
स्मिथ र वार्नर प्रतिबन्धित भए यताको खँडेरी
स्मिथ र वार्नरमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि कम्जोर बनेको अस्ट्रेलियाले उक्त प्रतिबन्ध यताका नौ महिनामा ८ खेल खेलेको थियो र त्यसमा ७ मा हार र एकमा जीत हासिल गरेको थियो । यसरी यस अवधिमा उसको सफलता दर १२.५ प्रतिशत देखिन्छ । उता यसै अवधिमा भारतले खेलेका १४ मध्ये ९ मा जीत र ३ मा हार बेहोरेको छ । यसरी उसको सफलता दर ९५ प्रतिशत देखिन्छ । यसरी नौ महिनाको खेल सफलता दर हेर्ने हो भने पनि भारत नै बलियो देखिन्छ ।
आपसमा भएका खेलमा यस्तो छ अवस्था
तर भारतको र अस्ट्रेलियाको परस्पर खेलिएका खेलहरूको नतिजा हेर्ने हो भने भारतका लागि त्यति सुखद छैन । दुवै टीमहरूले सन् १९८० मा पहिलो एकदिवसीय खेल खेलेका ती दुईले आजसम्म १२८ खेल खेलेका छन् जसमा भारतले ४५ मा र अस्ट्रेलियाले ७३ खेलमा जीत हासिल गरेको छ भने १० खेल नतिजाबिनै टुंगिएका छन् ।
यसरी पछिल्लो २९ वर्षमा भारतको जीतको प्रतिशत ३८.१३ प्रतिशत रहेको छ भने अस्ट्रेलियाको जीतको प्रतिशत ६१.८७ रहेको छ । यसरी समग्र पारस्परिक प्रतिस्पर्धाको नतिजामा भने अस्ट्रेलिया अगाडि रहेको छ ।
अस्ट्रेलियामा सधैं कम्जोर भारत
उता अस्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा भारतको प्रदर्शन अझै निराशाजनक देखिन्छ । उसले हालसम्म अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेलेका ४८ खेलमध्ये ११ मा मात्रै जितेको छ भने अस्ट्रेलियाले ३५ खेल जितेको छ । यीमध्ये २ खेल नतिजाबिना नै टुंगिएका थिए ।
यस शृंखलामा दुवै टोलीका सदस्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
अस्‍ट्रेलिया: एरोन फिंच (कप्‍तान), उस्‍मान ख्‍वाजा, शन मार्श, पीटर हैंड्सकोम्ब, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, एश्‍टन टर्नर, मार्क्स स्‍टोइनिस, एलेक्‍स करी, जे. रिचर्डसन, बिली स्‍टेनलेक, जेसन बेहरेनडर्फ, पीटर सिडल, नाथन लियोन, एडम जम्‍पा ।
ट्याग्स: India Vs Australia ODI